Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने नुवाकोटका सिडिओ सरुवा गराउन नेकपाका सांसद र मेयर एकजुट !
अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने नुवाकोटका सिडिओ सरुवा गराउन नेकपाका सांसद र मेयर एकजुट !
नुवाकोट, कार्तिक १ । नुवाकोट जिल्लामा प्रथम श्रेणीको कर्मचारी (सहसचिव)लाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाउने गरिएको थियो।
असार २५ मा भने गृह मन्त्रालयले द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)लाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटायो। गृह मन्त्रालयबाट झंकनाथ ढकाल सिडिओको रुपमा नुवाकोट पुगे। जानेवित्तिकै उनले कर्मचारीहरूलाई सुशासनको ‘मन्त्र’ जपाउन थाले।
कोभिड-१९ को महामारी चलिरहँदै पनि उनले प्रशासन सुधारका काममा हात हालेका थिए। भ्रष्टाचार हुन नदिने आफू शून्य सहनशीलतामा बस्ने नीति लिए, अरू कर्मचारीलाई सोही नीतिमा हिँड्न भने। प्रलोभन देखाउनहरूसँग ढकाल तर्किन थाले।
अपवादको रुपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्नेबाहेक सबै कुरा ‘अपडेट’ गर्न लगाए। कहिल्यै परिवर्तन नहुने गरेर सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको फोन नम्बर एउटै कायम गराए।
यी कुराहरू भए भने सेवाग्राहीले पनि आरामपूर्वक सेवा लिने मौका पाउँछन् भन्ने ढकालको तर्क छ। आफैंले आफैंलाई लक्षित गरेर ‘टार्गेट’ बनाउन सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। सो काम पूरा गरेर देखाउनैपर्ने नियम बनाए।
गुर्जुभन्ज्याङमा विरामी लैजानका लागि पनि मुस्किलले एम्बुलेन्स चल्थ्यो। ग्राभेल गरेर मोटर गुड्न सजिलो बनाइएको छ। दुक्तेश्वर गाउँपालिका-१ मा भूकम्पपीडित अहिले पनि घरविहीन अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई त्रिपाल र खाद्यान्न बाँडिएको छ।
सुशासन निम्ति काम गर्ने सिलसिलामा ढकालले अदालतका आदेशका फाइल पल्टाउन थाले। सो क्रममा उनले ‘तादी र त्रिशूली नदीमा रहेका गैरकानुनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनू’ भन्ने २०७५ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश देखे।
त्रिशूलीमा त क्रसर बन्द भइसकेका रहेछन्। तर, तादी नदीमा पाँच वटा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको ढकालले थाहा पाए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कसको? सिडिओकै हैन र? भन्दै ढकालले ती पाँच वटै क्रसर उद्योग असोज २ र ४ गते बन्द गराए।
संघीय सांसद नारायण खतिवडाले भने यस्तो आरोपमा सत्यता नभएको बताए। उनले भने, ‘जिल्लामा काम गर्न ल्याइएको सिडिओको सरुवा गर्न किन परो र? मैले चाहेँ भने सरुवा गराउन शक्तिकेन्द्र धाउनै पर्दैन।’ उनी पूर्वएमाले हुन्। – सेतोपाटीबाट